Chọpụta ihe a nwere ike ịhụ n’obodo Calpe na Alicante | Akụkọ Njem
Mpaghara Alicante dị na Valencian Community ma pụta ìhè karịa ihe niile n'ihi na ọ bụ ebe ezumike njem nlegharị anya ọtụtụ iri afọ. Taa ọ gara n'ihu ịbụ isi ihe dị mkpa na nke a, ọ bụ ezie na ebe ọ bụla kwesịrị ịnwe ekele maka ihe niile ọ nwere ike inye anyị. Taa anyị ga-ahụ ihe enwere ike ime ma nwee obi ụtọ na Calpe, Alicante.
El Obodo Calpe dị na mpaghara ugwu nke mpaghara Alicante, n’ebe a maara dị ka Marina Alta. Ọ bụ ebe ga-apụ apụ karịa maka osimiri ndị ahụ na coves ndị meriri ndị njem niile bịara ya, mana nke ahụ nwere ike ịnye anyị karịa njem njem osimiri.
2 Lọ Ezenwaanyị
3 Castlọ ukwu nke Calpe
4 Ndị Casanova
5 Ebe ochie nke Calpe
7 ọnụnụ nnu
8 Osimiri Calpe
Nke a bi ka bi na Bronze Age, dị ka ihe ochie na-egosi. N’ebe a ebe obibi izizi nke Iberia bikwa na mpaghara kachasị elu ma emesịa enwere ọnụnọ nke ndị Rom, dị ka mkpọmkpọ ebe nke obí eze na ụlọ ndị ọzọ gosipụtara. Ha gafekwara oge ndị Alakụba bụ ebe e wusiri ike na obere ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya nke ụlọ ahụ chebere. Taa, anyị nwere ọnụ ọgụgụ ndị hụla ọtụtụ narị afọ na narị afọ nke akụkọ ntolite na nke na-elekwasị anya karịa ihe niile na-erigbu ndị njem ya. Site na mpaghara okike rue oke osimiri ya na akuku mmiri ya, Calpe bu ebe ama ama ichota n’oge oge ọkọchị.
na Baños de la Reina bụ ebe ihe ochie nke aburula Akụ nke Mmasị Omenala. Ebe a ndị Rom nwere nwere obí eze nke nwere ọtụtụ ime ụlọ ị ga-ahụ etu e si chọọ ya mma, yabụ echee na ọ bụ nke onye dị mkpa n'oge ya. N’akụkụ ụsọ oké osimiri ahụ, e nwekwara ụfọdụ ọdọ mmiri ndị e ji aka ha gwuru n’ime nkume ahụ nke na-anọgide na-eje ozi dị ka ebe a na-asa ahụ ma jiri ya mee ihe dị ka ebe maka azụ azụ ọtụtụ narị afọ gara aga ma ị pụkwara ịhụ mkpọmkpọ ebe nke baths nke ndị Rom.
Castlọ ukwu nke Calpe
N’oge ya, enwekwara nnukwu ụlọ ndị Alakụba na Calpe nke dịdebere ndagwurugwu Mascarat. Taa ị pụrụ ịhụ a Towerlọ nche nke narị afọ nke XNUMX nke ejiri ihe ndi eji eme ulo ochie. Ebumnuche ụlọ elu a bụ iji gbochie mwakpo ndị ohi, nke mere eji kee ya n'ebe dị elu. Enweghi ihe fọdụrụ nke ụlọ ochie ahụ. Ka o sina dị, ịbịaru ebe a bụ ezigbo echiche maka echiche dị na mpaghara dị elu.
Nke a ụlọ bụ ụlọ nke nnukwu mmasị n'ihi na ọ bụ ụdị ụlọ mgbidi ewusiri ike. N'ụlọ a ị nwere ike ịhụ ebe obibi na ebe ọrụ ọnụ. Ọ bụ ụlọ nwere mmasị karịsịa ịmara ụdị oghere kachasị dị na mpaghara a. N'ime ya ị nwere ike ịhụ patio abụọ, otu n'ime ha n'ime, yana mpaghara dị iche iche, site na corral na stables. Ejikwa ya arụ ụlọ, nke na-enye ya ụdị ọdịnala ahụ nke ebe a na-akọ ugbo.
Ebe ochie nke Calpe
Isi ihe ọzọ nke mmasi anyị nwere mgbe anyị gara ileta obodo Calpe bụ obodo ochie ya. Anyị nwere ike ịhụ ụlọ nzukọ obodo ochie na nso ụlọ ụka nke taa bu ebe ngosi ihe mgbe ochie nke obodo. Anyị nwekwara ike ịhụ Churchka Parish nke Nuestra Señora de las Nieves nke na-esote Old Church, nke bụ naanị otu na Mudejar Gothic na Valencian Community. Rollinggagharị n'okporo ámá ndị mara mma na obere nke Calpe na-atọ ụtọ ihe owuwu ya bụ otu n'ime ebe nleta a.
El Peñón de Ifach bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na akara nke Calpe ọ dịkwa na ogige a na-echekwa echekwa. Ọ bụ oke nkume nke na-abanye n'oké osimiri ma jikọta ya na ala site na ala dị warara, na-etolite akụkụ ugwu Betic. Enwere ụzọ njem nwere ike ịme na nke na-akpọrọ anyị gaa n'elu nkume ahụ, site na ebe ị nwere ọmarịcha echiche nke obodo ahụ na nke oké osimiri na ọbụlagodi ụbọchị doro anya ị nwere ike ịhụ Balearic Islands.
na Salinas bụ ịda mba nke nọrọ na mpaghara a kemgbe ọtụtụ narị afọ nakwa na e ji ya mee ihe ọbụna n'oge ndị Rom. Ọ bụ ebe dị jụụ ebe ị nwere ike ịhụ nnụnụ na-akwaga ebe ọzọ. Na mgbakwunye, n'akụkụ nnu nnu anyị nwere Baños de la Reina. Ọ bụ ebe nwere ụfọdụ mmasị n'ihi na ọ bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke Calpe na ọ bụ a pụrụ iche eke ohere.
Ọ bụrụ na e nwere ihe na-ewu ewu na Calpe, o doro anya na ọ bụ osimiri ya. E nwere imerime coves na aja osimiri nke na-enwe ezigbo ihu igwe. Na Levante ma ọ bụ la Fossa beach Ọ dị n’ebe ugwu nke nkume ahụ, Arenal-Bol beach dị n’obodo mepere emepe na Cantal Roig beach dị n’akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Calpe, Alicante